Ururka Haweenka Dumarku ayaa caawiya Dumarka e.V. waxay bixisaa la talin iyo dalabyo taageero ah loogu talagalay iskaashiga rabshadaha Haweenka ay Saameeyeen iyo Carruurtooda. Rabshadaha ka dhanka ah haweenka waxay yeelan karaan qaabab kala duwan, sida Jirka, Maskaxda, Dhaqaale iyo / ama rabshada galmada.
Dumarku waxay caawiyaan haweenka e.V. waxaa lagu heli karaa telefoonka ka hooseeya: 0941 – 24000.
Waqtiyada xafiisku furan yahay:
Isniinta ilaa Khamiista: 8.00 Waqtiga ilaa 17.00 Waqtiga
Freitag: 8.00 Waqtiga ilaa 14.00 Waqtiga
Waqtiyada kale ee la tashiga ayaa suurta gal ka ah qabanqaabada hore.
Waxa kale oo nalooga soo wici karaa wakhti ka baxsan saacadaha xafiisku furan yahay iyada oo loo marayo adeegga wicitaanka Taleefanka. Lambarka taleefanka gacantu wuxuu ku haray mashiinka jawaabta.
Haweenku waxay caawiyaan haweenka e.V. sida xarunta latalinta ay ku bixiso macluumaad, talobixin iyo taageero laxiriira rabshada Guriga. Heeganka haweenka Madaxbannaan wuxuu siiyaa Dumarka ay saameeyeen rabshadaha iyo Carruurtooda badbaadin iyo hoy ammaan ah.
Is kalsoonida Hoyga Haweenk
Telefonka: 0941 - 24000
Fakis: 0941 - 2802520
Xarunta wax ka qabashada /
xarunta talo siinta firfircoon
Tilmaamaha xarunta la talinta:
In Bas lagu raaco: Linie 6 Jihada Wernerwerkstraße /Joogsiga baska Gumpelzhaimerstraße.
Gaari ku raac: Meelo gawaarida la dhigto ayaa la heli karaa.
Sidoo kale waad tixraaci kartaa taas Qadka caawinta ee wadanka oo dhan ka leexo dagaalka qoyska: 08000 – 116 016. Tan ayaa la heli karaa saacad kasta oo sidoo kale waxay ku siin kartaa talo waqti gaaban gudaheed luuqado kala duwan.